ढल्केवर कृषि बजारमा माछापुच्छ्रेको 'क्यूआर कोड' सेवा सुरू - The Public Today
ढल्केवर कृषि बजारमा माछापुच्छ्रेको ‘क्यूआर कोड’ सेवा सुरू
ढल्केवर, फागुन ८ गते । बजारमा सामान किन्न पैसा लिएर जानुपर्छ । तरकारी किन्दा क्यास पैसा दिएर किन्नुपर्छ । कतिपयको बैंकमा पैसा हुन्छ तर खल्तीमा हुँदैन । खल्तीमा पैसा नभए कुनै सामान आउदैन । हातकोहात पैसा नदिए कसैले सामान दिदैनन् भन्नु कुनै नौलो कुरो होइन । तर शनिवार धनुषाको ढल्केवरमा त्यो भएन । भयो त त्यसको ठीक उल्टो ।
ढल्केवरस्थित कृषि उपज बजारमा आफ्नो कृषि उपभोग्य वस्तु बेच्न आएका कृषक तथा व्यापारीहरुले आफ्नो सामान त बेच्यो तर हातमा पैसा आएन । सामान बेचेर हातको हात पैसा नाआए जो कोहि पनि दुखि हुन्छन् । तर कृषक तथा व्यापारी भने दङ्ग थिए । कारण थियो ‘क्यू आर कोड’ ।
शनिवार ढल्केवरस्थित कृषि बजारमा घाँटीमा क्यू आर कोड झुण्ड्याएका कृषक तथा व्यापारीसंग माछापुच्छ्रे बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. विरेन्द्र महतो, बैंकका सिईओ संतोष कोइराला, नेपाल सरकारका कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा बैंकका सञ्चालक जय मुकुन्द खनाललगायतले तरकारी तथा कृषि उपभोग्य सामानहरु किने । किसानलाई सामान बापतको रकम उनीहरुले हातकोहात नदिएर त्यहीबाट उनीहरुको बैंक खातामा पैसा पठाइदिए । खातामा पैसा गएपछि कृषक तथा व्यापारीको मोबाईलमा घण्टी बजेको थियो । बैंक खातामा पैसा आएको मेसेज मोबाईमा आएपछि उनीहरु खुशी भएका थिए ।
नेपाललाई ‘क्यास लेस’ बनाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको अवधारणाअनुसार शनिबार ढल्केवरस्थित कृषि बजारका कृषक तथा व्यापारीलाई माछापुच्छ्रे बैंकले क्यू आर कोड हस्तान्तरण गरेका छन् ।
ढल्केवरस्थित रहेको माछापुच्छ्रे बैंकको शाखाले डिजिटल प्रविधिमार्फत आर्थिक कारोबार गर्न यहाँका खुद्रा तथा थोक विक्रेतालाई क्यु आर कोड हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
शनिबार माछापुच्छ्रे बैंकले कृषि बजारको प्राङ्गण ढल्केवरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यस अवसरमा बैंक संचालक जयमुकुन्द खनालले खुद्रा तरकारी पसलबाट खरिद गरिएको सामानको क्यू आर पद्धतीबाट भुक्तानी गरेर उदाहरण देखाएका थिए ।
उक्त क्युआर कोड सेवा सुरु भएसँगै ढल्केवर कृषि उपज हाटबजारमा तरकारी तथा फलफूल किन्नको लागि जाने उपभोक्ताले आफ्नो बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसन प्रयोग गरी आफूले खरिद गरेको तरकारी तथा फलफूलको रकम पसल सञ्चालकलाई सिधै खातामा भुक्तानी गर्न सकिने बताइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको क्यासलेस अवधारणामा जाने योजनालाई आत्मसात गर्दै जनस्तरसम्म पु¥याउन यस प्रकारको प्रविधिको सुरूवात गरेको माछापुच्छ्रे बैंकका कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) सन्तोष कोइरालाले बताए ।
उनले क्यू आर कोडको माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा खुद्रा पैसा दिनु नपर्ने र व्यापारीले पनि बचत गर्न बैंकसम्म जानुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने जनाए ।
मिथिला नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिनारायण महतोले नेपालमा थोरै समयको अन्तरालमा थुप्रै प्रविधिको विकास भएको र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न सक्ने बताए ।
‘विगतमा बिजुली खानेपानीका महसुल तिर्न घण्टौ लाइनमा बस्नु पथ्र्यो तर यस प्रकारको प्रविधिको प्रयोग गरेर घरमै बसी–बसी भुक्तानी गर्न सकिन्छ । नगदमा आर्थिक कारोबार गर्दा लुटिने र हराउने डर पनि रहदैन’ उनले भने ।
मिथिला नगरपालिकाका उपमेयर तारा लामा बस्नेतले यस्तो प्रविधिको पहुँच सबै समक्ष पु¥याउनु पर्ने बताइन् ।‘सबै मान्छे पढेलेखेका हुँदैनन्, उनीहरुलाई यस्तो कुरा थाहा हुँदैन । बजारमा शिक्षित तथा अशिक्षित दुबै वर्गका व्यवसायी छन् र ग्राहक पनि दुबै वर्गका हुने हुँदा उनीहरुका लागि सम्बन्धित निकायले तालिमको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ’ उनले भनिन् ।
माछापुच्छ्रे बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. विरेन्द्र महतोले क्यूआर कोडले धेरै सुविधा दिने बताए । ‘कसैसँग क्यास छैन भने सिधै मोबाइलबाटै पैसा पठाउन मिल्छ, क्यास नभए पनि भयो, बचतका लागि बैंकमा जानु परेन, चेन्ज गर्न झन्झट नरहने जस्ता थुप्रै सुविधा प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाई थियो । उनले सबै व्यवसायीलाई क्यु आर कोडको प्रयोग गर्न आग्रह गरे ।
क्यू आर कोड हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक दुर्गेश गोपाल श्रेष्ठ, कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ महतो, माछापुच्छ्रे बैंक ढल्केवर शाखाका प्रबन्धक अमित खडका, बैंकका कर्मचारी, स्थानीय व्यापारीलगायतको उल्लेख्य सहभागीता रहेको थियो ।